Dib-u-habeyn, Dib-u-qoris iyo hawl-gab | Martech Zone
Dib-u-habeyn, Dib-u-qoris iyo hawlgab Mawduuc
Jimco, Nofeembar 21, 2014 Douglas Karr
Had iyo jeer waxaa jira baahi weyn oo noocan ah oo ku saabsan waxyaabo cusub oo inteena badani ay si fudud ugu dhibtoonayaan inay la socdaan qorista waxyaabo ku kalifaya oo qiimo u siinaya dhagaystayaasheena. Tani Infographic ka socda Marketo ilaalinta mawduucyada waa talo adag.
Dib isu abaabul - Waan isticmaali karaa repurpose iyada oo ah ereyga tan, laakiin inta badan waxaan u isticmaalnaa cilmi baaris, sheekooyin iyo muuqaallo kala duwan oo dhexdhexaad ah markaan horumarinno waxyaabaha ku jira. Waxaa laga yaabaa inaan baaris ku sameeyno webinar, laakiin sidoo kale waxaan u qornaa warqad cad oo la socota iyo wakiilka infographic iyo boostada si aan u dhiirrigelino. Ma aha in qof kastaa u dheefshiido waxyaabaha si isku mid ah, sidaa darteed u sheegidda sheekadaada oo aad uga fiicnaato dhex-dhexaadinta waa waxtar aad u sareysa.
Rerite - Waxaan haynaa qoraalo ku saabsan tiknoolajiyada oo runtii isbeddelay. Halkii aan ku qori lahayn qoraal cusub isbeddelka badeecada, hadda waxaan xoojineynaa qoraalkii asalka ahaa waana cusbooneysiinay. Faa'iido weyn ayaa ku jirta tan tan - adoo ilaalinaya sharafta URL, tirooyinka wadaagista bulshada ayaa lagu dari karaa qiimeynta mashiinka raadinta lama hayn karo oo keliya, laakiin xitaa waa la hagaajin karaa haddii boostada si fiican loo hagaajiyo!
Hawlgab - midkani wuu adkaa, laakiin waan qabanay. Waxaan si sahal ah uga badneyn 5,000 oo fariimaha kuleh degelkan laakiin waxaa si sahal ah ujirey in ka badan 1,000 fariimood oo aan quseyn ama gabi ahaanba waqtigoodu dhamaadey. Qaarkood waxay ahaayeen dhacdooyin hore, kuwo kalena waxay ahaayeen teknoolojiyad duugoobay, kuwa kalena waxay ahaayeen alaab aan sii jirin. Xaqiiqda ah inaad waqti siisay inaad wax qorto si aad u tirtirto hadhow waxay ilmadayda ku keenaysaa indhahayga… laakiin waxaan jeclaan lahaa in mawduucaygu diiradda saaro mowduucyada weli khuseeya.
Istaraatiijiyaddani waxay qayb ka ahaayeen barnaamijka dayactirka guud ee aan bilawnay taas oo keentay innaga sadex jibaarista taraafikada ee dabiiciga ah sanadba sanadka ka dambeeya. Waxaa laga yaabaa inaad ka fikirto sida aad u horumarin laheyd qorshe dayactir ah oo loogu talagalay boggaaga kaas oo hubiya in dhammaan waxyaabahaagu ay ku habboon yihiin oo waqtigooda ku habboon yihiin!
Tags: dayactirka waxyaabahasuuqosuuqyo infographicdib u habeyn ku sameeyahawlgab ka noqoshodib u qor mawduuca
7 Su'aalood oo aad Weydiiso Hay'addaada Kahor Intaadan Saxeexin